ကျောက်တည်နေသူများအတွက် အမှန်အကန် ကျောက်ကျစေတဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း (၁၃)နည်း – Suehninsi
ကျောက်တည်နေသူများအတွက် ကျောက်ကြေနည်း ၁၃ နည်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ကျောက်ကွဲရွက်ကိုအခြောက်လှန်းလ္ဘက်ခြောက်လိုခပ်သောက်အရွက်စိုကိုထမင်းနဲ့အတို့မြုတ်လိုလုပ်စား ၁၀ရက်ဆွဲသောက်သဲခြေကျောက်တောင်ပျော်ကျတယ်။ အုန်းသီးစိမ်းထဲကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်ပြီး စားပါသောက်ပေးပါ…
ကျောက်ဖရုံသီးကို ခြစ်ယူပီးသကြားလေးနဲနဲထဲ့ အရည်ကိုညှစ်ပီးသောက်ရင်ပျောက်ပါတယ် ကိုယ်တွေ့ပါ တပင်တိုင်မြနန်းဆေးကိုသောက်ပါကျောက်ကြွေကျသွားပါလိမ့်မည်…၅.. ဖလံတောင်ဝှေးနှင့်ရေကြက်ချက်စားရင်ပျောက်ပါတယ်..သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်ပင်ပြုတ်သောက်လည်းရပါတယ်…၇..ကျွဲနှာခေါင်းချိတ်ပင်ကိုဆန်ဆေးရည်နဲ့ပြစ်ပြစ်သွေးတနေ့နှစ်ကြိမ်သောက် ဆီးကျောက်ပျော်ကျပါတယ်…သည်းခြေအိတ်မှာကျောက်တည်တာဆို ပန်းသီးစားတဲ့နည်းသုံးပါ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့ဘူးတာပါ..
ဆေးနည်း မသိခဲ့ရင်ပြောပေးပါမယ်….ပန်းသီးကို တနေ့ ၅ လုံး ၆ လုံး စားပါ ၆ရက်ဆက်တိုက်စားပါ။ ၆ရက်မြောက်နေ့မှာ ညစာ မစားဘဲ ညနေ၆နာရီမှာ ဆားခါး (ဆေးဆိုင်တွေမှာရပါတယ်) တဇွန်းသောက်ပါ။ ည 8 နာရီမှာ ဆားခါးတဇွန်းထပ်သောက်ပါ။ ည ဆယ်နာရီမှာ သံလွင်ဆီ / နှမ်းဆီ လက်ဘက်ရည်ပန်းကန်သေး တလုံးစာသောက်ပါ။ ဝမ်းသွားပါမယ်။ ဝမ်းထဲမှာ ကျောက်ကြေတွေပါသွားပါတယ်။ ကျောက်ကြီးရင်၂ခါ ၃ခါလောက်လုပ်ပါ။
တကယ်ပျောက်ပါတယ်။လက်တွေ့ပါ။ နိုင်ငံခြားဆေးခန်းတခုမှာပြတော့ ကျောက်ကကြီးနေပြီမို့ တပတ်အတွင်းခွဲခိုင်းတာပါ။ ပန်းသီးနည်းတွေ့ပြီး စားကြည့်ရာက သက်သာသွားတာပါ။ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်ပျောက်ဆေးနည်း(ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်ပါက ဤနည်းနှင့် မဆိုင်ပါ)အုန်းသီး(ဇွန်းခြစ်) ကိုအဝလှပ်ပါ ။ယမ်းစိမ်းငရုတ်ကောင်းတစ် စေ့ ခန့် အမှုန့် ကြိတ်ပြီး အုန်းသီးထဲ ထဲ့ ပါ။ နာရီဝက်ထားပါ။ပြီးလျှင် အရည် အဖတ် အကုန် စား ပါ။
၁ နေ့ ၁ ကြိမ် သောက်ပါ။ ကျောက်ကြီးလျှင်၃ ရက် သောက် ပါ။ ယုံကြည် စိတ်ချစွာသောက်ပါ။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း လက်တွေ့ ပျောက်၍ သူ့အားမေးပြီး တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာပါစေ။ ဆီးကျောက်တည်တာဆို ကြက်သွန်နီ အကွင်း လိုက်လှီးပြီး သကြားနဲ့ ရေတ ဖန်ခွက် စိမ်သောက်ပါ… ဝက်သားနဲ့ဗေဒါရွက်ချက်စား…ငါးပြေမနဲ့ စောင်းလျားသီးချက်စားပါ လက်တွေ့ပါ…
ငါးပုံသားကျောက်ကိုမီးဖုတ်ပီးအမူတ်ကြိတ်ပီးသောက်ပီးရင်အုန်းရည်သောက်ရပါတယ်။ဆီးလမ်းကြောင်း နဲ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည် တာဆိုရင် ကျောက်ဖယုံသီးကို သဘေ်ာသီးခြစ်နဲ့ ခြစ်ပြီး အရည်ကို ညစ်သောက်ပါ…မနက်တစ်စိပ်…ညနေတစ်စိပ်သောက်ပါ…တစ်လုံးကိုနှစ်ရက်သောက်လို့ရပါတယ်….ကျောက်ဖယုံရည်က အရသာဆိုးပါတယ်…သောက်ခါစအကျင့်မရခင်မှာ…
အရည်သောက်ပြီးလျှင် သကြား ထန်းလျက် စသဖြင့် အနည်းငယ်စားပြီး ခံတွင်းအရသာဆိုးတာကို ဖြေနိုင်ပါတယ်….
ကိုယ်တွေ့မို ပြောပြလိုက်တာပါ…ကျောက်ကြွေတဲ့အထိသောက်ရပါမယ်….ကျောက်ကြွေတဲ့အခါ ဆီးနောက်ပါတယ်…
အမျိုးသားဆိုပါက ဆီးလမ်းကြောင်းကျဉ်းတာမို့…ကျောက်ကြွေချိန် ဆီးလမ်းကြောင်းနာကျဉ်တတ်ပါတယ်…
ကြောကျဖရုံသီးကို ခွဈယူပီးသကွားလေးနဲနဲထဲ့ အရညျကိုညှဈပီးသောကျရငျပြောကျပါတယျ ကိုယျတှပေ့ါ တပငျတိုငျမွနနျးဆေးကိုသောကျပါကြောကျကွှကေသြှားပါလိမျ့မညျ…၅.. ဖလံတောငျဝှေးနှငျ့ရကွေကျခကျြစားရငျပြောကျပါတယျ..သံမနိုငျကြောကျမနိုငျပငျပွုတျသောကျလညျးရပါတယျ…၇..ကြှဲနှာခေါငျးခြိတျပငျကိုဆနျဆေးရညျနဲ့ပွဈပွဈသှေးတနနှေ့ဈကွိမျသောကျ ဆီးကြောကျပြျောကပြါတယျ…သညျးခွအေိတျမှာကြောကျတညျတာဆို ပနျးသီးစားတဲ့နညျးသုံးပါ လကျတှပြေ့ောကျခဲ့ဘူးတာပါ..
ဆေးနညျး မသိခဲ့ရငျပွောပေးပါမယျ….ပနျးသီးကို တနေ့ ၅ လုံး ၆ လုံး စားပါ ၆ရကျဆကျတိုကျစားပါ။ ၆ရကျမွောကျနမှေ့ာ ညစာ မစားဘဲ ညနေ၆နာရီမှာ ဆားခါး (ဆေးဆိုငျတှမှောရပါတယျ) တဇှနျးသောကျပါ။ ည 8 နာရီမှာ ဆားခါးတဇှနျးထပျသောကျပါ။ ည ဆယျနာရီမှာ သံလှငျဆီ / နှမျးဆီ လကျဘကျရညျပနျးကနျသေး တလုံးစာသောကျပါ။ ဝမျးသှားပါမယျ။ ဝမျးထဲမှာ ကြောကျကွတှေပေါသှားပါတယျ။ ကြောကျကွီးရငျ၂ခါ ၃ခါလောကျလုပျပါ။
တကယျပြောကျပါတယျ။လကျတှပေ့ါ။ နိုငျငံခွားဆေးခနျးတခုမှာပွတော့ ကြောကျကကွီးနပွေီမို့ တပတျအတှငျးခှဲခိုငျးတာပါ။ ပနျးသီးနညျးတှပွေီ့း စားကွညျ့ရာက သကျသာသှားတာပါ။ ဆီးလမျးကွောငျးကြောကျတညျပြောကျဆေးနညျး(ကြောကျကပျတှငျကြောကျတညျပါက ဤနညျးနှငျ့ မဆိုငျပါ)အုနျးသီး(ဇှနျးခွဈ) ကိုအဝလှပျပါ ။ယမျးစိမျးငရုတျကောငျးတဈ စေ့ ခနျ့ အမှုနျ့ ကွိတျပွီး အုနျးသီးထဲ ထဲ့ ပါ။ နာရီဝကျထားပါ။ပွီးလြှငျ အရညျ အဖတျ အကုနျ စား ပါ။
၁ နေ့ ၁ ကွိမျ သောကျပါ။ ကြောကျကွီးလြှငျ၃ ရကျ သောကျ ပါ။ ယုံကွညျ စိတျခစြှာသောကျပါ။ ကြှနျတော့ သူငယျခငျြး လကျတှေ့ ပြောကျ၍ သူ့အားမေးပွီး တငျပွခွငျးဖွဈပါသညျ။ ကနျြးမာပါစေ။ ဆီးကြောကျတညျတာဆို ကွကျသှနျနီ အကှငျး လိုကျလှီးပွီး သကွားနဲ့ ရတေ ဖနျခှကျ စိမျသောကျပါ… ဝကျသားနဲ့ဗဒေါရှကျခကျြစား…ငါးပွမေနဲ့ စောငျးလြားသီးခကျြစားပါ လကျတှပေ့ါ…
အရညျသောကျပွီးလြှငျ သကွား ထနျးလကျြ စသဖွငျ့ အနညျးငယျစားပွီး ခံတှငျးအရသာဆိုးတာကို ဖွနေိုငျပါတယျ….
ကိုယျတှမေို့ ပွောပွလိုကျတာပါ…ကြောကျကွှတေဲ့အထိသောကျရပါမယျ….ကြောကျကွှတေဲ့အခါ ဆီးနောကျပါတယျ…
အမြိုးသားဆိုပါက ဆီးလမျးကွောငျးကဉျြးတာမို့…ကြောကျကွှခြေိနျ ဆီးလမျးကွောငျးနာကဉျြတတျပါတယျ…
Source ; Myo Win Than, Happy and Lucky